आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने ६ सुत्र, के भन्छ अध्ययन ? - News Bihani
के तपाई पत्याउनुहुन्छ ? आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सुत्र के हो भनेर । बच्चाले बाबुबाट २३ ओटा र आमाबाट २३ ओटा क्रो*मो*जोम प्राप्त गरेको हुन्छ । ति क्रो*मोजोम मध्य अटोजम क्रोमो*जमहरुले रगत समुह निधारण ,उचाइ, छालाको रंग आदिको निधार्रण गर्दछ भने दुइवटा क्रोमोजोमले बच्चाको लि*ङ्ग निधारण गर्ने गदर्छन् ।
पुरुषमा एक्स, र वाइ तथा महिलामा एक्स एक्स क्रोमोजोम हुन्छ । यौ*न सम्प*र्कको समयमा पुरुषको वाइ क्रोमोजोम र स्त्रीको एक्स क्रोमोजोमको मिलन भएमा छोरा र पुरुषको एक्स क्रोमोजोम र महिलाको एक्स क्रोमोजोमको मिलन भएमा छोरी जन्मने गर्दछ । कुनै पनि स्त्री परिपक्क भएपछि रजस्वला चक्र सुरु हुने गदर्छ भने यो चक्र साधारण तया १२-१४ वर्ष देखि सुरु भएर ५०-५५ वर्ष भित्र बन्द हुने गदर्छ ।
स्त्रीमा रजस्वला चक्र २८ दिनको हुने गदर्छ । कसैकसैमा भने केही दिन अघि र केहीदिन पछि पनि हुन सक्छ । प्रत्येक २८ दिनमा रजस्वला हुने स्त्रीमा करिव १४ औं दिनमा डिम्व निस्काषन हुने गदर्छ र २४ औं दिनसम्म रहन्छ । यो अवधिमा स्त्री र पुरुष विच यौ*न स*म्पर्क हुन गएमा गर्भ रहन्छ । स्त्री र पुरुष विच यौ*न स(म्पर्क भएको २४ देखि ४८ घन्टा सम्ममा शुक्रकिटले डिम्वलाई भेटेमा गर्भ रहन्छ अन्यथा शुक्रकिटहरु नष्ट हुने गर्दछन् ।
यौ*न स*म्पर्कको समयमा पुरुषद्धारा २० लाख शुक्रकीट छाडेपनि ति मध्य स्वास्थ्य र सक्रिय शुक्रकीट मात्र डिम्वलाइ भेटाउन डिम्ववाहिनी नलीतर्फ बढदछन् यसरी अगाडि वढने क्रममा केहि शुक्रकीटहरु एकआफ्मा गुचमुचिएर नष्ट हुने गदछर्न भने केहि शुक्रकिट वाटो विराएर डिम्व नभएको डिम्ववाहिनी नली तथा पाठेघरको मुखसम्म पुगेर नष्ट हुने गर्दछन् । करिव २०० जति शुक्रकीट मात्र डिम्वको नजिक पुग्न सफल हुन्छ । यि २०० शुक्रकीटहरुमध्य पनि एउटा स्वस्थ्य र सक्रिय शुक्रकीटलाइ डिम्वको माइक्रोभिलाले च्याप्छ र अरु शुक्रकीटलाइ पस्न दिलैन ।
पहिलो : यदि तपाई छोरा जन्माउन चाहनु हुन्छ भने स्त्री रजस्वला भएको दिन देखि अण्ड उत्पादन हुने दिनसम्म सहवास गर्नु हुदैंन । यसो गर्दा पुरुषमा वाइ क्रोमोजोमयुक्त शुक्रकीटको बृद्धि हुनुका साथै महिलाको योनाङ्गमा क्षारीयपना आउन मद्दत गर्दछ जस्का कारण छोरा जन्मन्छ ।
दोश्रो : स्त्रीको योनी नजिकै अम्लीय वातावरण बढि हुने गदर्छ सहवास गर्दा वीर्यलाई योनीनजिकै छाडिदिने हो भने छोरी जन्मन्छ । यदि सहवास गर्दा लिङ्गलाई एकदम भित्र छिराएर सवै वीर्य भित्रै स्खलन गराउने हो भने छोरा जन्मन्छ किनभने पाठयघरको मुख नजिकै क्षारीय वातावरण बढि हुन्छ यसले गर्दा वाइ क्रोमोजोमयुक्त शुक्रकिट सक्रिय हुन्छ ।
शनिवार, मंसिर ६ २०७७०७:१८:५८
शरणार्थीको पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन
कोरोना संक्रमणबाट सुत्केरी महिलाको मृत्यु